Faallaynta iyo farshaxanka Ubaxle Q1aad MAANSADA CUSUB EE XOG- SHEEG | Somaliland Today
Let teenagers lie-in, urge top scientists →
Faallaynta iyo farshaxanka Ubaxle Q1aad MAANSADA CUSUB EE XOG- SHEEG
Hadday wajigiina xiirtay
Hadday xaajiga kabaysay
Hadday xumihii ku baaqday
Hadday xadhig kuu maleegtay
Hadday marna kula xadraysay
Maansadan cusub oo dhawaan soo baxday. waxaa curiyey Hal- abuurka Cabqariga ah ee Cabdiraxman M. Cali Ubaxle.Maansadu waa badwayn iyo bandhig murtiyeed caalami ah oo aan sharax iyo faallo lagaga bogan Karin, lagana gayoonayn. Markaad eegto dhinacyada kala duwan ee dhiiri galinta,dhab-sheega,iyo dheelli-tirka,murtida iyo miisaanka dhaxal galka ku aroora, waxay ina dhax qaadsiinaysaa waayaha iyo wakhtiga isdaba taxan,Waxayna inagu darandooriyaysaa hogga tus xeel dheer iyo xog-warran ay inagu taabsiinayso xaaladda dhabta ah ee manta lagu jiro. Bal aan ararta ku dhandhansiiyo adaa sii dhex qaadiye.
Tixdiyo arartiyo xulkeeda
Habkiyo xeerkiyo shinkeeda
Haddaan xoorkiyo liskeeda
Xogtiyo maansada runteeda
Hoggiyo xeeshiyo dhextaalka
Xarfaha quruxdiyo dhigaalka
Xubnaha luuqdiyo dhawaaqa
Murtida xirfadiyo hannaanka
Haddaan galo xulantideeda
Meerisyadan hoose waxay inoo iftiiminayaan kana ifafaale bixinaysaa adduunyada eeggan iyo sida ay daba goosiga u tahay iyo waliba sida aan looga dareen qabin .xanuunnada midba mid kadarnyahay hawgu sii darnaado aafada cudurka ebola,Haddaan yar dul istaago EbolaWaxuu ka dilaacay markii ugu horreysay lagu arkay dalal ay kamid tahay suudaan hillaadii 1976 Wuxuuse Soo ifbaxay cudurka Ebola bishii Maarso 2014 kadib markii lagu arkay kana dillaacay dalka Gini.
Markii ugu horaysayba cudurkan waxaa u dhintay 53% wuxuu saameeyey tiro gaadhaysa 285 oo qof, markii labaad wuxuu ka qarxay dalka koongo wuxuuna saameeyey dad gaadhaya 318 qof dhimashadana waxaa lagu qiyaasay ilaa 88 qof,Markii saddexaad waxaa loo aqoonsaday firuskan sababa cudurkan kadib markii daanyeero qaba laga dhoofiyey dalka Philippines lana keenay deegaanka vir ginia ee dalka maraykanka
Sikastaba ha ahaate aafada cudurkani waa mid kawareerisay adduunka oo dhan Laga soo billaabo markii uu uu cudurku dillaacay, feyrasku waxa uu ku faafay dalalka Laaybeeriya iyo Siiralyoon. Dillaaca cudurkan waa kii ugu ba’naa taariikhda la hayo marka laga eego xagga xaaladaha tirada dadka ee u li’anaya iyo baqaha laga qabo. Sidoo kale xiisadaha dunida ka taagan,sida jabhada iyo ururada adduunku la dawakhay sida isis,al shabaab,al qaacida,ansaaru shareecah,book xaraam, xamaas,iyo kuwa kale oo badan
Markaan xaalkeena fiirshey,
Xagwalba dunidii ka eegay
Adduunyadu xoorid weeye
Abaar iyo xaaluf weeye
Xanuun iyo gaajo weeye
Xumaan iyo faasiq weeye
Xatooyiyo tuugo weeye
Dagaal iyo xiisad weeye
Xabaallihii baa hadlaaya
Xilligii suurkaa dhawaaday
Xarrago dirir waa la dhaafay
Xidhbay fari kulla xushaaye
Xag kale aan kuu kaxeeyo
Maansadu waxay kaloo ka xog bixinaysaa dhacdooyin is dabataxan iyo xiisado soo noqnoqday oo dalka ka jira. Raaba qaadka xanuunka siyaasadda ee dabayshiisii dib u bilaabantay iyo sida nin waliba xigtii iyo xaafadiisiiba xero ugu ootay,
Dharaar walba xaalad taagan
Xajiin iyo dhiig ladaadsho
Xisbiyo urur laysku haysto
Xilaan loo kala hadhaynin
Xin iyo xaafado is shiida
Xamaasadda laysku laayo
Xanuun iyo cudur la faafsho
Haddaan xeer loo samaynin
Xuduuddana layska dhaafo
Xalwaara haddaan laraadin
Xaqiiqdana laysu sheegin
Miyaan xoolaha kaliidan?!!.
Xag kale aan kuu kaxeeyo;
Waxay meerisyadan kale daaha karogaysaa habdhaqanka laba wajiilaha ah ee reer galbeedka iyo sida ay adduunka ugu xadgudbeen una majara habaabiyeen . Iyagoo ku doodaya in xaquuqda aadamaha ilaalinayaan caruurta iyo haweenkana udoodayaan.
Haddana ilmihii Qasa gantaalaha ku eegaya. Dumarkii iyo maxastiina hubka ku garaacaya. Cid dar xumada hoy la’aanta, waxbarasho, caafimaad iyo daryeel ugu gurmatayna aanay jirin iyo sida islaamka loogu soo duulay ee meel walba loogu tun jileecsaday,iyo sida ay war mooga u yihiin iyagiina xabadda laysugu dhiibay.
Xornimo waa lagu dhashaaye
Kuwaa xornimada ku baaqa
Xaquuqul insaanka sheegta
Haddana dunidaba xasuuqa
Awood iyo xoog u sheegtay
Xaquuqda caruurta laysa
Xuskoodana maalin siisay;
Xaquuqda haweenka aasta
Xaquuqda Dameer u taagan
Haddana dadka aan xishmaynin;
Xuduudahan loo sameeyey
Haddaan xaashe run moodo
Meerisyada murtida iyo miidu da ayso ayaa waxay ina farayaan inaan qofkii xumaan iyo arin aan loo meeldayin oo sax ahayn kuula yimada aan layka daba roorin layskana raacin iyadaan laga fiirsan hadduu qaldanyahayna qaladkiisa la tusin,
Anoo xiddigaha maraaya
Xabaasha haddaan isgeeyo
Qof qudhi igu xeelad guuro
Ninkii xumo iigu baaqa
Xaqaba anigoon u sheegin
Haddaan xumihii ku raaco
Meerisyadan kale ee xulka ah waxay inooga digayaan masiiba wayn iyo marka qofku hawadiisa iska raaco ama uu ilba nimada ilbaxnimo moodo, dhalanteedkana dhab u qaato oo ka dheeraado iskana wayneeyo dhaqan iyo diinba,kuna daydo cid aanay isku mabda iyo aragti toona noqon Karin oo ka dhacsan nolosha oo dhan,
Korkayga intaan xaraasho
Intaan dhaqankayga xooro
Xashiishada ruux cabbaaya
Xaqdhawrkana aan aqoonin
Xishoodkana meel ku tuuray
Intaan kaligii xigtaysto
Intaan xabagtana la nuugo
Haddaan xaragiyo dan moodo
Xashiishkana aan dhex seexdo
Miyaan xoolaha kaliidan?.
Markale iyo hal-abuurku inagu baraarujinayaa inaguna tusaalaynayaa sida ay u kala aragti fogyihiin una kala dheeryihiin, nin xero ku oodan iyo nin dadkiiba dareersaday oo nin qabiil ku dholola iyo nin qaran ku dhaata oo yay fartu ku godantahay mayee waa arin inawada khusaysa adba ila dhugo.
Anoo sida xeedha buuxda
Dadkoo dhami iigu xoomo
Haddaan xayndaab ka doorto
Qabyaaladi waa xeruune
Haddii xero laygu ooto
Meerisyadanina waxay muujinayaan siyaasad xumada dalka kajirta iyo dhaqamada siyaasi,hogaamiye,iyo madaxda aynu dooranay , ee inaga xaabxaabsaday xabaddana inagu hor joogsaday si midwaliba uu xil ugu kasbado ama danihiisa ugu fushado magacyada qabiilka, dhalinyarada iyo haweenka ee lagu qudhaabsado lana dardar galiyo marka loollanka iyo ololaha lagu jiro hadhawna dabayl looga cararo,sida aanay isu lahayn afkooda iyo uurkoodu ee midba mid haadaan uga talaabsanyo haddana isaga dhigayo nasteexiisii iyo garabkii kale ahaa ee isga la jaal ahaa.
Hadday tahay xaasid xaasid
Xabbadda aan kugu hor joogo
Intaan xilka kugu helaayo
Hadday aragtidu xumaatay
Hadday maqalkii xanjaysay
Hadday xaaraan jidaysay
Xaqiiq iyo aamin beeshay.
Murtaa tidhi “xaajo tuurleh
Ninbaa dhaha waa xariire
Afkiisa xidhaan xujoobin”
Waxaan nolol loo xad dhaafin
Adduunyadu waa xawaare;
Waxaan xaqa looga waaban
Xaqiiqadu waa run sheegga;
Waxaan xumo loogu dhiirran
Xabaalbaa ina sugaysa;
Waxaan been loogu xoogsan
Xisaabaa naga horraysa;
Waxaan balo loogu xiisin
Xadaaradu waa wanaaga;
Waxaan xilkas looga maarmin
Xurmadu waa kala danbaynta;
Waxaan xilgab loo amaanin
Waxaan jirin xeer qoraaya;
Waxaan xaaran la raadsan
Xalaasha adoo helaaya;
Waxaan hadal loogu xiiqin
Xigmadi waa aamusnaanta.
Waxay u xishaan yuhuuda
Islaamka xarbiga ku oogan
Sidii laysugu xasuuqay
Sidii loo kala xidhmeeyey
Xantoobada loogu boobye
Halkay xaaladi marayso
Xaqiiqda adaa hayuune
Rabow falastiin xogteeda
Rabaw masar iyo xerteeda
Baqdaad iyo xaaladeeda
Rabow suuriya xaqeeda
Rabow liibiya xalkeeda
Rabow xamar iyo dalkeeda
Rabaw xarumaha islaamka
Rabow xulafada maraykan
Rabow ka xoree yuhuuda
Rabow diintaada xooji
Rabow xaqa noogu hiili.